Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Ny finiavana pôlitikan’ny mpitondra mihitsy no tsy misy
Inty sy Nday: Ny finiavana pôlitikan’ny mpitondra mihitsy no tsy misy
Maro ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena no miady hevitra amin’ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Tsy ny amin’izao fotoana ihany fa ny hatrizay rehetra mihitsy. Eo, ohatra, ny fireharehana sy fizahozahoan’ny mpitondra ho nahavita zavatra raha vao misy biriky iray nahavitany fanorenana. Raha ny lojikany anefa dia anjara-asa andavanandron’ny mpitondra ny manangana biriky, ary tsy biriky iray fa an-tapitrisany mihitsy, ka raha iray no vitany dia tsy tokony hireharehany fa tokony mahavita an-tapitrisany izy.
Matetika koa no tsy manana finiavana pôlitika hiroso amin’ny tena fikatsahana vahaolana maharitra nefa mahasoa ny firenena ny mpitondra. Izay sehatra atahorany ihany no ihazakazahany ikatsahana vahaolana raha vao manambana hihetsika.
Ohatra iray amin’ireny ny fitakian’ny miaramila tambin-karama. Poa toa izay ny fandraisan’ny mpitondra fanapahan-kevitra nanomezana fahafaham-po azy ireo, taona vitsy lasa izay. Mazava ny antony. Satria mitana basy ka sao hikitikitika ny tombontsoan’ny tena ireo.
Omaly izay, nanapa-kevitra ny hitokona (Sit in) teny anoloan’ny ministeran’ny Fampianarana ambony eny Tsimbazaza ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra miara-dia aoa min’ny Sendika Seces eto Antananarivo. Teboka roa no nifotoran’ny fitakian’izy ireo, dia ny tambin-karama ho amin’ny fikarohana (Indemnité de recherche) ho an’ireo mpampianatra mpikaroka efa ao anatin’ny fisotroan-drononony nefa mbola manohy manao fikarohana. Ny faharoa dia ny tambin-karama ho amin’ny tombon’ora nampianarana (indemnité des heures complémentaires). Tsy mbola vory avokoa teny anoloan’ny ministeran’ny Fampianarana ambony ireo mpampianatra mpikaroka dia efa nanaiky ny handray sy hifampiresaka amin’izy ireo ny minisitra ny Fampianarana ambony, ary tao anatin’ny fihaonana no nampanantena ny hamaha ny olana araka izay tratra ny ministera. Nasaina nanangana vaomiera manokana ahitana ny solontenan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny avy amin’ny ministeran’ny Fampianarana ambony ary ny avy amin’ny ministeran’ny Vola moa.
Dia nitsahatra avy hatrany ilay fikatsahana hanao fitokonana (sit in).
Eo izany no mahavariana amin’ny mpitondra fanjakana. Tsy ny ankehitriny ihany, hoy izahay fa ny teo aloha rehetra. Raha ny lojikany dia ny sehatra ny fampianarana ambony no tokony tsy hisy olana indrindra amin’ny raharaha toa izany satria sangany amin’ny fahaizana amam-pahalalana ny sokajin’olona eny. Ny dikan’izay dia tokony manana fahazarana sy fahaiza-manao amin’ny fikatsahana vahaolana sy fisorohana ny olana tsy hitranga izany ny tompon’andraikitra eny. Toa ny mifanohitra amin’izany anefa no mitranga satria raha tsy mihetsika, manambana hitokona ny mpampianatra na ny mpianatra na ny mpandraharaha, eny mety efa miroso amin’ny fitokonana mihitsy ary hitan’ny mpitondra fanjakana fa mahery vaika na tsy hay hotohaina ilay hetsika vao mandray fanapahan-kevitra hamaha ny olana na hamaly ilay fitakiana. Dia tsy maintsy iandrasana hetsika na fitokonana hatrany ve fa tsy azo nosorohina ?
Ny marina dia tsy manana finiavana pôlitika hikatsaka ny tena tombontsoam-bahoaka ny mpitondra fanjakana nifandimby teto, ary voafatotr’andraikitra ny amin’izany ny ankehitriny, ary teboka iray isehoan’izany izao raharahan’ny mpampianatra mpikaroka izao.